Top 5 Alternatives ka MOBILedit
> Resource> Top List> Top 5 Alternatives ka MOBILedit
MOBILedit, ihe ngwa n'ihi na synching ekwentị na PC, na-ahuta ka òtù Achilles nke ngwa-ụwa n'ihi na nke mgbanwe ọ me n'ime oghe usoro. Ebe ọ bụ na ọ nwere ike mfe akwado nta ọ bụla ika si gam akporo ka iOS ma mgbe handsets na mmemmem vasatail OS si Symbian na Android ka Windows Mobile na Blackberry, ya mere, ọ bụ nnọọ ewu ewu n'etiti ọrụ. Ihe bụ nsogbu bụ na ọ bụghị free na-ahu nagide ya kemfe ọrụ mkpa ka ị anọ $ 25. Nke a bụ maa a downside nke MOBILedit ngwa. Ke ibuotikọ emi m ga-ịme ka ị n'elu ise ngwa na-eje ozi dị ka ndị kasị mma a pụrụ iji dochie MOBIledit.
Dị ka MOBILedit, niile ngwa kpọtụrụ aha n'isiokwu a na-akwado a dịgasị iche iche nke handsets na os. N'adịghị ka MOBILedit, ngwa ndị adịghị akpakọrịta ozi "zitere site MOBILedit!" na gị zitere ederede. Ndị a ngwa ọdịnala-ekwe ka ekwentị na-ekwentị data transfer na Iṅomi data na Outlook.
1. Wondershare MobileGo for Android awade a pụrụ ịdabere na ọzọ ka MOBIledit
Wondershare MobileGo ma ọ bụ Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) akwado niile isi ụdị nke Android ngwaọrụ tinyere Samsung, Sony, HTC na LG na-achọ eriri USB ma ọ Wi-Fi njikọ maka syncing ngwaọrụ gị na PC. Ọ dị mfe na-eji na ejisie data na mbadamba na ekwentị. Na ya, i nwere ike nyefee, ndabere, weghachi music, video, photos, kọntaktị, SMS ozi, na ndị ọzọ. Ọ bụ maka Windows OS na Macintosh, nke na-eme ya a vasatail nhọrọ maka gam akporo ọrụ. Ị nwere ike izipu multiple ozi ederede ọsọ ọsọ na-aza ekwentị oku site na desktọpụ gị dị ka mma. Nyefee kọntaktị na site na Windows adreesị Book, Outlook Express na Windows Live Mail dịkwa nnọọ mfe mere. Ebe a bụ ihe ị ga-mkpa.
Nwere a smart na enyi na enyi na onye ọrụ interface.
Otu Pịa nkwado ndabere na mpaghara weghachite dị mkpa data.
Jikwaa ngwa, kọntaktị, ozi, music, video, photos na ndị ọzọ na na gị SD kaadị na otu ebe.
Naghachi furu efu kọntaktị, ozi, ngwa, music, video, photos na ndị ọzọ si gị android ngwaọrụ. (The Windows version eme)
Nyefee data site na otu ekwentị ọzọ n'agbanyeghị na ha na-agba ọsọ Android, iOS na Symbian (Nokia). (The Windows version eme)
Adịghị mmekọrịta photos na Outlook.
Wụnye Wondershare MobileGo ngwa.
Jikọọ na ngwaọrụ gị na iji eriri USB ma ọ bụ Wi-Fi.
Export, ibubata ma ọ bụ hichapụ ngwa, music, SMS, kọntaktị wdg site na iji kwekọrọ ekwekọ nhọrọ.
Gaa Super Toolkit iji nweta ihe saliert atụmatụ.
ibudata ngwa, videos na music si Google Play, YouTube, na ndị ọzọ weebụsaịtị.
2. MyPhoneExplorer - a kwesịrị ịrịba ama MOBILedit ọzọ
MyPhoneExplorer bụ pụrụ ịdabere na, free na mfe na-eji. Ọ nwere ike jikọọ ihe gam akporo ngwaọrụ na kọmputa site na atọ omume: USB cable, Wi-Fi na Bluetooth. Otu n'ime ndị ọzọ uzo ozo ka MOBILedit, onye a guzo n'ihi na ọ-enye gị ohere bụghị nanị hazie gị SD kaadị data ma mekọrịta ya Outlook na Thunderbird. Ị pụrụ ọbụna mbupụ / ibubata ederede (SMS) ozi.
Ọ bụ a freeware na dị iche iche syncing nhọrọ na-awa dị ka kọntaktị nwere ike synced na Outlook ebe Kalinda na Google.
Dakọtara na SMS chats, nzà faịlụ mgbe syncing.
Nwere ohere ndetu echekwara na ekwentị.
Na-enye ọtụtụ dị iche iche iche iche nke toolbars n'oge echichi na usoro-aghọ na-ewe oge na mgbagwoju anya.
Na-enye nkwado ndabere na mpaghara weghachite nhọrọ naanị maka foto management.
Download MyPhoneExplorer Client ngwa gị Android na ngwaọrụ ma MyPhoneExplorer omume na gị na desktọọpụ.
Mgbe wụnye, na-amalite ahịa ngwa.
Jikọọ na ngwaọrụ na gị PC.
Ngwa ga-agba ọsọ na ndabere mgbe usoro ihe omume na-achọpụta rụọ niile data.
Ị ga-kpaliri ya maka n'ịrụ mbubata / mbupụ na hazie omume.
3. MOBILedit ọzọ maka Samsung Android Devices-- Samsung Kies
Samsung Kies bụ ika si ukara ngwá ọrụ maka syncing ya Android ngwaọrụ na kọmputa. Ọ na-akwado ma Windows OS na Macintosh na-arụ ọrụ nke ọma na ọ bụla Samsung ngwaọrụ, dị ka Galaxy usoro, nkịtị handset na / ma ọ a mbadamba. Ya mfe Nyefe data n'etiti ekwentị na kọmputa na-emepụta a ndabere kwa. Ijikwa na-ekere òkè ụdị nile nke faịlụ gụnyere videos, foto na audio, kọntaktị na ndepụta, eziga / anata ozi ịntanetị site na Outlook na ijikwa ozi ederede bụ omume na nanị otu click. Ịnata na na na wụnye femụwe mmelite-aghọ mfe n'ihi na Samsung ọrụ na ha nwere ike nweta nkwalite ngwaọrụ sistemụ dị ka mma.
Na-eme ka nkekọrịta, wụnye, exporting, importing, na-akpụ akpụ na iwepu nke ngwa gaa na site na SD kaadị dị mfe dị ka agụta 1 3.
Ọ bụ free na obụrede mbụre nke oké ọrụ interface.
Na-arụ ọrụ na Samsung ngwaọrụ mgbe mgbe ụfọdụ ọ na-anaghị jikọọ Samsung ngwaọrụ desktọọpụ.
File transfer nēche na-iji nwayọọ mgbe ụfọdụ.
Onye ọrụ interface bụghị nnọọ mma.
Wụnye Samsung Kies ngwa na ngwaọrụ gị.
Jiri eriri USB na jikọọ na ngwaọrụ gị na PC.
Ọ bụrụ na-eji Samsung Kies Air ngwa, mgbe ahụ, jikọọ site Wi-Fi.
Ẹkedori na ngwa ma ọ ga-akpaghị aka mmekọrịta gị na ngwaọrụ.
Malite na-ebufe ma ọ bụ na-ekere òkè.
4. DataPilot ana achi achi kasị data transfer ya n'ụzọ kwụ ọtọ interface
DataPilot bụ ihe SD kaadị njikwa ngwa nke synchronizes ihe gam akporo ngwaọrụ na workstation. Ọ na-depụtara n'etiti ole na ole ezi uzo ozo ka MOBIledit n'ihi na e wezụga ngwa ngwa na-ebufe data ma si na kọmputa na-eke ndabere faịlụ, ọ na-enye ohere ọrụ ịmepụta otu interface na iwu !, Palm software, na Outlook Express. Niile nsụgharị nke Windows (Win98 na n'elu) na-akwado site na DataPilot na ọ na-eme na-eme data mbubata / mbupụ kemgwucha adaba. Ya Akwụkwọ ndekọ aha ọtụtụ Manager taabụ weere kọntaktị effortlessly si Outlook Express, Palm desktọọpụ na MS Outlook. Ị nwere ike mfe akara mkpa kalenda ihe, set ụdaolu na mkpu aj u na MP3, Midi na RTTL formats na zipu / enweta ozi ederede kpọmkwem site na desktọọpụ. DataPilot awade image edezi na ringtone / akwụkwọ ahụaja customizing ọrụ oke. Image nchịkọta akụkọ ohere ọrụ nyefee, mee ka ihe mgbanwe na ike backups ihe oyiyi na ihe multimedia faịlụ. Iji jikọọ ị ga-mkpa inwe ike Bluetooth ma ọ bụ nkwụnye na ngwaọrụ gị site na eriri USB.
Ihe karịrị puku abụọ nsụgharị dị iche iche nke handsets na-akwado.
Awade free ndụ mmelite ruo otu afọ.
Tinye a mmiri akara na bụla foto.
Naanị otu ngwaọrụ nwere ike synchronized na kọmputa.
Ọ bụghị a freeware naanị ikpe mbipute nwere ike ibudata, nke nwekwara expires na ruo ụbọchị asaa.
Download ikpe mbipute si DataPilot website.
Wụnye ngwa na gị android ngwaọrụ.
Jikọọ na ngwaọrụ na a PC.
Mgbe nchọpụta a window ga-egosi gị niile data a ga-bufee.
5. Go wireless site na otutu AirDroid
E nwere ike ịbụ na ọtụtụ uzo ozo ka MOBIledit ma AirDroid, a na-ewu ewu freeware ngwa, bụ dị iche iche n'ihi na ọ na-enye gị ohere agbaji-free na mmekọrịta data-ejighi eriri. AirDroid akwado niile isi OS gụnyere Linux, Mac na Windows. Ị nwere ike ijikwa gị data n'ụzọ dị mfe site a web-nchọgharị nyeere mgbe ịlụ aha na ngwa si ukara website. Ya ngwa ngwa installs ngwa, na-ahapụ ị na-akpali ma na-eso audio / video faịlụ na-atọghata kọmputa gị n'ime a widescreen android ngwaọrụ. The User Interface bụ nkecha ma ọgaranya na-egbuke egbuke agba. Ọrụ nwere ike ịrụ a dịgasị iche iche nke omume ngwa ngwa si web-nchọgharị dị ka ị na-elele foto, nbudata audio / video faịlụ, eziga ma ọ bụ ịnata SMS ozi, download na wụnye / uninstall ngwa, jikwaa na update kọntaktị na ndepụta, wdg AirDroid bụ ike na n'amaghi na ngwa na-na-agaghị Agbaghara. Ọ na-achọ Android version 2.1 ma ọ bụ n'elu.
Ọ bụ free, anabata, n'amaghi ama, na obụrede mbụre ihe mara mma ọrụ interface.
Na-enye dịgasị iche iche nke bara uru web-dabeere taabụ na njikwa dị ka Data Counter na a n'ụzọ zuru ezu kwajuru File Manager.
The njikọ na nbudata ga kwụsịtụ mgbe ngwaọrụ gị na-arahụ ụra mode ka na-enyefe faịlụ site na web.
Mkpa netwọk na ma ndị Android ngwaọrụ na kọmputa.
Download na wụnye AirDroid ngwa na gị android ngwaọrụ.
Wụnye a ụkpụrụ-Dabara nchọgharị dị ka Mozilla Firefox, Opera na Google Chrome.
Jiri Obodo Ikuku Network (LAN) ma ọ bụ njikọ Ịntanetị jikwaa data.
Top ise Android Photo-ahazi
The Best MyPhoneExplorer Alternative maka akporo ekwentị na Tablet
Top 30 3GP Player maka Windows / Mac / iOS / Android
Top 20 GOM ọkpụkpọ reviews na uzo ozo
Top 40 free video converters maka Windows 10
10 Adele si CD Albums Fans ga-efe